TUV sud cert
TUV sud cert
TUV atsimo mankany Shina, manangana haingana ny fitarihana marika.Nanangana laboratoara any atsimon'i Shina izy io.Nanomboka tamin'ny 2004, dia nanangana fiaraha-miasa lalina sy akaiky amin'ny fisafoana anbotek.Anbotek dia lasa fantsona manam-pahefana, haingana ary matihanina ho an'ny mpanjifa mangataka ny fanamarinana TUV amin'ny UPS, adaptatera herinaratra ary jiro.Ny fitsapana Anbotek dia mpiara-miombon'antoka stratejika amin'ny vondrona atsimo TUV nandritra ny taona maro, ny volan'ny orinasa no voalohany amin'ny indostria, ary izy no laboratoara fiaraha-miasa tsara indrindra tany atsimon'i Shina tamin'ny 2009, 2010, 2011 ary 2012. Ny fitsapana Anbotek dia nahomby sy haingana. nampihatra ny TUV atsimo certification ho an'ny efa ho 500 orinasa, izay efa fantatry ny mpanjifa be dia be.
Ny fitsapana Anbotek dia manampy anao hahazo mora foana ny fanamarinana TUV antony enina
Antony iray tombony amin'ny fampiharana fonosana - andiana fitsapana vavolombelona santionany iray, mandalo indray mandeha, manafoana ny tsingerin'ny fanamarinana, mba hahafahanao mampitony ny sainao hahazo haingana ireo taratasy fanamarinana isan-karazany navoakan'ny TUV, mba hamidy haingana ny vokatrao manodidina ny izao tontolo izao;
Antony 2: Ny tsingerin'ny fanamarinana sy ny vidiny dia manana fifaninanana fototra - ny TUV dia manome anbotek miaraka amin'ny ekipa injeniera sy mpiasan'ny visa, ary manome laharam-pahamehana amin'ny fikarakarana ny karazana tranga rehetra sy ny filana fanamarinana, mba hahazoana antoka fa mazava ny vidin'ny fanombanana sy ny tsingerin'ny fanamarinana. tombony noho ny namany.
Anbotek miaraka amin'ny manankarena miaraka amin'ny traikefa momba ny tetikasa fanodinana batch amin'ny karazana fantsona, trangan'ny vanim-potoana antoka, ny vidiny kokoa noho ny fifaninanana antony telo tombon-tsoa amin'ny serivisy tokana - ny anbotek detection co dia manome fenitry ny vokatra feno toro-hevitra momba ny fifantenana ny antontan-taratasy fangatahana vokatra fandikan-teny fanatsarana ny fanoherana ny fitarihana fanaraha-maso ny orinasa, toy ny serivisy tokana;
Antony efatra: manokana TUV vondrona VIP fanompoana - nahazo ny voninahitra ny tsara indrindra mpiara-miasa amin'ny TUV nandritra ny efa-taona nisesy, mankafy ny ambony indrindra fitsaboana ny Ambaratonga Voalohany, mba hahazoana antoka fa ny fampiharana ny tetikasa tsirairay dia mety ho tena sarobidy sy VIP fitsaboana;
Antony 5: mifantoka amin'ny sehatry ny fanamarinana TUV mandritra ny 10 taona - tranga mahomby mihoatra ny 100 isan-taona, mahay amin'ny fahaiza-manaon'ny fizotran'ny fangatahana TUV hiatrehana haingana ny olana sy ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa TUV, ka ny fomba fampiharana mandreraka anao lasa tsotra sy azo fehezina;
Antony 6: ny fifandraisana akaiky eo amin'ny sampan-draharaha namoaka taratasy fanamarinana - anbotek fitsapana anjara sy ny zokiolona mpitantana ny alemà TUV fifanakalozana fitsidihana sy ny fifandraisana imbetsaka isan-taona, mba ho afaka hifehy ny fototra loharanon-karena fanamarinana sy hahatonga ny fiasan'ny TUV mora kokoa. ary mifanaraka amin'ny filan'ny tsena
TUV sy anbotek voninahitra fiaraha-miasa
TUV mpiara-miasa tsara indrindra ho an'i Afrika Atsimo tamin'ny 2009, 2010, 2011 ary 2012